Shina akanjo mitoka-monina azo ampiasaina amin'ny akanjo azo antoka Fitafiana mitokana nitafy akanjo vita amin'ny orinasa sy mpamatsy | ASN
Fitsapana fitafiana EN13795-1-2019, EC-REP
Toetoetra Tanana lava, vozony boribory (Velcro), lambam-bozaka, fehin-kibo avo roa heny, fanjairana Ultrasonic
PP Package 1 pc / kitapo
Carton size 60 * 44 * 36cm
Lanja mavesatra 7.5KG
- Ahoana ny fomba hanaovana fanadihadiana?
Pls lazao anay ny fitaovana, habe, habetsaky ny vokatra ilainao, ary koa ny fomba fanaterana tianao. Miarahaba antsika mpividy sambany. Alefaso aminay fotsiny ny sarin'ireo lahatsoratra ilainao omena anay na lazao aminay ny zavatra takinao. Afaka manome anao entana azo oharina na avo lenta kokoa aza izahay.
- Azonao atao ve ny manao ny endrika ho ahy?
Izany no tanjontsika! Tianay ny mamolavola araka ny hevitrao sy ny mombamomba anao. Ny fanovana kely dia azo atao maimaimpoana. Na izany aza, fiovana lehibe famolavolana dia handoa sarany fanampiny.
- Inona ny ora fandefasana matetika?
Ny ora fandefasana dia matetika 45 andro.
- Inona avy ireo teny fandoavambola?
Manaiky ny T / T izahay.
- Ahoana raha misy olana amin'ny vokatra aorian'ny nahazoana?
Maka sary ho anao izahay alohan'ny fanamafisana ny fandefasana. Raha manamarika ny lesoka amin'ny famokarana ianao dia andefaso mailaka izahay (sary vokatra amin'ny alàlan'ny mailaka). Hanitsy izay tsy mety na hanao tambiny hafa izahay.
Previous: Orthopedic Splint
Manaraka: Fonon-tànana PVC